OR Work in France v UK | Refugee Info Bus
Eyyama dalagaa fi gargaarsa koolugaltootaf godhamu biyya UK fi Faransay (France) wol bira qabuun ilalla
Kolugalaa ta’ee dalagaa
dalaguun seeraan ni
Lakki. Ji’oota jalqabaa 12 hin dandeettu . Koolugaltootaaf dalagaan hin eeyyamu akkasumas seeran ala. Seeran ala osoo hojjatan qabamnaan hidhaaf nama saaxila.
Ji’oota 6 keessatti Iyyata keetiif mootummaa France irraa murteen siif hin laatamne yoo
ta’e, Eeyyama dalagaa siif eyyamamaadha.
Haa ta’uu garuu, haala kana keessatti dalagaa argachuun hedduu rakkisaadha. Dhimma kanarratti gorsaa fi odeeffannoo Collectif de soutien des exiles du 10ème
arrondissement de Paris irraa ni argattu. (maddi-French Refugee Council)
Haa ta’uu garuu, Hojiilee ogummaa garagraa barbaadan kanneen hanqinni hojjataa mudhatu fi koolugaltonni akka hojjachuu danda’an seerri eeyyamu fi hojjachuu danda’an jiru. Kunis (ogeessa kompiiteraa) computer scientists, ykn Hoggana ijaarsaa garagaraa (construction site managers). Iddoo jireenyaa kee irrattii hundaa’uudhaan
Ogummaleen barbaadaman garagaraadha. Dabalataafi kan yeroo yeroon maxxanfaman
ilaaluuf hidhaa kanaa gadiitti fayyadamuu dandeettu:
Lakki. Ji’oota jalqabaa 12 hindandeettu . Koolugaltootaafdalagaan hin eeyyamuakkasumas seeran ala. Seeranala osoo hojjatan qabamnaanhidhaaf nama saaxila.
Haa ta’uu garuu, Hojiileeogummaa garagraa barbaadankanneen hanqinni hojjataamudhatu fi koolugaltonni akkahojjachuu danda’an seerrieeyyamu fi hojjachuu danda’anjiru. Kunis Ogeessafayyaa(neersii), fi contemporaryand ballet dancers, andgeophysicists fi kkf.
Woraqaa jireenyaa baqataa yoon argadhe hojjachuu danda’aa?
Eyye. Woraaqaa jireenyaa kan
baqattummaa qabda taanaan
biyya Faransay Keessatti
dalaguu ni dandeettu.
akkuma lammii biyya UK
kamiiyyuu mirga dalaguu
Akka Koolugalaatti gargaarsi mallaqaa ani argadhu maal fakkaata?
Hangi gargaarsa mallaqaa kan hundaayu mana jireenyaa mootummaan si kaaye keessa jiraatta moo iddoo biraati kan jedhu irratti hundaaya. Kana irratti wabii wanti ta’u hin jiru.
Kan jiraattu mana jireenya mootumman dhiyeesse keessa yoo ta’e, guyyaatti, 6,80€ argatta.
Mana jireenyaa mootummaan qopheessu keessa kan hin jiraanne yoo ta’ee fi idoo biraatti ufii keetiif kafaluun sirraa eeggama yoo ta’e guyyatti 14,20€ argatta. It is difficult to say that the additional 7,40€ dabalataa kun mana jireenya dhunfa kafaluuf ni gaha jedhanii yaaduun ni
ulfaata. kanumaan wal qabatee baqattoonni hedduun jireenya rakkisaa jiraatu. (maddi-
Asylum in Europe) dha.
Koolugaltoonni hunduu jalqaba irraa eegalanii £37.75 torbaaniin ni argatu.
Gargaarsi mallaqaa inni akkanaa kuni a Section 96 jedhama. Kan isiniif kennemus card keessatti naqameeti (Aspen card). Mallaqa baafachudhaafis kaardii sana mashiinii keessa naqxu. Koolugaltonni ji’atti al tokko mana poostaa deemuudhaan mallatteessuu qabu. Yoo jijjiirraan jiraates isin beeksisu.
Koolugalttoonni iyyannoo isaaniif yoo diddaa duraa argatan, gargaarsa mallaqaa isaanif godhamu sana gara
biraatti jijjiirachuu qabu. Innis Section 4 jedhamuun beekkama, mallaqni isaan argatanis torbaaniin £35.39 dha. kunis nyaata dabalatee
wantoota barbaachisoo tokko tokko bitachudhaaf oola. Koolugaltoonni iyyata lammaffa iyyatan eeggachutti
jiran mana jireenyaa ni argatu.